‘लक डाउन’ उल्लंघन र अनुमतिबिना बाँडेपछी सेनिटाइजर नियन्त्रणमा: मेयर राई | ‘लक डाउन’ उल्लंघन र अनुमतिबिना बाँडेपछी सेनिटाइजर नियन्त्रणमा: मेयर राई – हिपमत
‘लक डाउन’ उल्लंघन र अनुमतिबिना बाँडेपछी सेनिटाइजर नियन्त्रणमा: मेयर राई
मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर रवीन राईले सरकारले घोषणा गरेको लक डाउन उल्लंघन गरेकाले सेनिटाइजर नियन्त्रणमा लिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले उर्लाबारी नगरपालिका सम्मको मात्र पास ल्याएर रतुवामाई प्रवेश गर्न नपाउने दावी गर्दै लकडाउन उल्लंघन गरेकाले सेनिटाइजर नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षित राखिदिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
मेयर राईले नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले अत्यावश्यकीय वस्तु राहत स्वरुप वितरण गर्दा नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने र एकद्धार प्रणाली मार्फत वितरण गनुपर्ने निर्णय गरेकाले त्यसो नगरेको पाइएपछी नियन्त्रणमा लिइएको बताए । ‘पहिलो कुरा लक डाउन उल्लंघन गरिएको छ ।
काठमाडौँदेखी उर्लाबारी सम्मको मात्र पास ल्याएर रतुवामाईमा ल्याउन मिल्छ ? दोस्रोकुरा कहिले विक्रिका लागि कहिले बाँड्न ल्याइएको भनिएको छ । खुल्ला बाँड्नका लागि २ गिलेन ल्याएको भेटियो । खुल्लाका बाँडेका कारण भोलि कुनै हानी नोक्सानी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सहि भए त ठिकै हो । गलत भए त्यसको अपजस नगरपालिकाले लिनुपर्छ ।’ उनले भने,‘सम्बन्धीत व्यक्तिलाई हामीले बाँड्न आमन्त्रण गरेका पनि छैनौँ । सरकारले घोषणा गरेको लक डाउन पूर्ण पालना गरेका हौँ । अहिलेको अवस्थामा हामी आफै स्क्रीनिङमा लागि रहेका छौँ । प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । यो अवस्थामा लकडाउन उल्लंघन गरेर वरिष्ठ समाजसेवी हुँ भन्दै देखाउनुपर्ने कारण के ?’
मेयर राईले राहत समाग्री अत्यावश्यक ठाउँमा नपुग्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै विपद व्यवस्थापन समितिकै बैठकले अनुमति विना कुनै पनि व्यक्ति र संघ संस्थालाई वितरणमा रोक लगाइएको स्पष्ट पारे । ‘लक डाउन उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । स्थानीयतहको अनुमति बिना राहत मनपरि बाँड्न पाइदैन । नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिलेनै यस्तो निर्णय गरेको छ ।’ उनले भने,‘व्यापारका लागि हो भने पनि सम्वन्धीत स्थानिय तह हामीसँग अनुमति लिनेकि नलिने ? लक डाउन उल्लंघन गरेर व्यापार गर्न पाइन्छ कि पाइदैन ? लकडाउन उल्लंघन गरेर व्यापार गर्न छुट् छ ? मोबाइल गाडीमा त्यसरी सामान बोक्दै हिड्न पाइन्छ ? तर, व्यापारका लागि भन्दा पनि बाँड्दै गरेको हामीले भट्यौँ, त्यसको फोटो पनि छ ।’
मेयर राईले राहत वितरण बाँड्न रोक नलगाएको बताउँदै अनुमति लिएर बाँड्न सवैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले नबाँड्न भनेकै होइन । जोखिमयुक्त ठाउँ छुट्याएका छौँ । अनुमति लिएर बाँड्ने भए हामी अति आवश्यक ठाउँ देखाइदिन्छौँ । राहत बाँडेको क्रेडिट हामीलाई चाहिएन, तर नगरपालिका मार्फत समन्वय गरेर हुनुपर्यो नि । मनपरि गरेर त भएन नी ।’ उनले भने,‘ व्यापरका लागि भए इटहरीहुँदै विराटनगर जान छाडेर सिजुवाबाट किन आउनुपर्यो ? त्यसैले नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षित राखिदिएका हाँै । सम्बन्धी ठाउँको अनुमति लिएर आए दिन्छौँ ।’
मेयर राईले नगर कार्यपालिकाको आइतबार बस्ने बैठकले स्यानिटाइजरका विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए । उनले स्यानिटाइजर नियन्त्रणमा लिएको सामान्य कृुरालाई राजनितिक रंग दिन खोजेको आरोप लगाए । ‘यहाँ संसारमै मानव अस्तित्व संकटमा छ । मान्छेनै रहला कि नरहला भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले भने,‘यो अवस्थामा सहि कामलाई पनि राजनिति रंग दिनु गलत हो । हामीले नियन्त्रणमा लिएको स्यानिटाइजर नगरपालिकामा सुरक्षित छ ।’
यता स्यानिटाइजर धनी निलम खड्काले संघिय राजधाजनी काठमाडौंदेखि सवै प्रकृया पुरा गरेर विक्रिका लागि ल्याएको १ हजार ५० थान सेनिटाइजर मेयर राईले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाए । उनले सवै कानुनी प्रकृया पुरा गरेर विक्रिका लागि ल्याइएको दावी गर्दै अत्यावस्यक वस्तु नियन्त्रणमा लिनु आश्चर्यजनक भएको बताए ।
उनले काठमाडौंदेखि १ हजार ५ सय थान सेनिटाइजर ल्याइएकोमा इनरुवा, इटहरी, उर्लाबारी रतुवामाईको सोमबारे हुँदै डायनियाँ, रंगेली र विराटनगर लगायतका ठाउँमा पुर्याउनका लागि लगिँदै गरेको दावी गरे । खड्काले सडकमा पर्ने अन्य पालिकाहरुले कुनैपनि अवरोध नगरेको बताए ।
शनिबार, चैत्र १५, २०७६मा प्रकाशित गरिएको